(Waxaa laga soo toosiyay Asiya)
Template:Country data Taiwan Taipei
Aasiya (Eeshiya Af-Ingiriis: Asia; Af-Carabi: آسيا; i/ə[unsupported input]ˈeɪʃə/) waa qaarada ugu weyn Dhulka iyo tan ugu dadka badan leh, taasi oo dhacda meel u dhaxaysa dhamaan qaaradaha kale ee dhulka. Qaarada Aasiya waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu le'eg tahay 44,579,000 square kilometres (17,212,000 sq mi), taasi oo u dhiganta ilaa 30% dhulka Dunidan iyo 8.7% oogada sare ee meerahan. Intaas waxaa dheer, qaaradan waxaa ku dhaqan shacabka ugu badan ee aduunka taasi oo gaadhsan 4.4 bilyan (labada wadan ee ugu dadka badan waa Hindiya iyo Shiinaha). Waxaa xusid mudan iyadna in qaarada Aasiya ay ka dhismeen boqortooyooyinka ugu horeeyay ee aadamuhu sameeyaan.
Wadanada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aasiya&oldid=191861"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 05:59, 3 May 2019.